Fitaovana haingana | Fametahana tsindrona haingana - Createproto - Createproto Tech Co., Ltd.
SERVICE / Fitaovana haingana
Fanotoana tsindrona haingana
Ny CreateProto amin'ny fangatahana dia manome fitaovana haingana amin'ny famolavolana alimina sy vy ary plastika fanodinana hamadika ny faritra misy anao mandritra ny 2-5 herinandro.
Avy amin'ny prototype, amin'ny hazakazaka fohy, ary avy eo ny ampahany amin'ny famokarana, manambatra ny fizotran'ny famolahana tsindrona haingana amin'ny haitao manan-tompo sy ny ekipa za-draharaha izahay mba hanomezana ampahany mavesatra atsindrona avo lenta, manampy anao hampihena ny risika famolavolana ary hitahiry ny vidin'ny famokarana.
MAZOTOA FANONTANIANA INDRINDRA
Famolavolana prototype | Mamorona fitaovana haingana amin'ny Bridge avy amin'ny Prototype mankany amin'ny famokarana
Ny prototype ambany dia ambany indrindra no fomba tsara indrindra hiarovana ny fotoana sy ny vidiny hanaovana ny endrika fitiliana sy ny fitoviana ary koa ny fanandramana ny tsena mialoha, na izany na tsy izany dia tsy mifanaraka amin'ny valiny farany sy ny fiasan'ny faritra vita amin'ny plastika namboarina. Rehefa tsy vonona amam-bolana ny fitaovanao amin'ny famokarana, ny famolavolana tsindrona haingana (fantatra koa amin'ny hoe prototipe na famolavolana malefaka) dia safidy tsara ho anao handraisana ampahany haingana miaraka amin'ny vidiny mirary.
CreateProto dia manangona vola amin'ny ozinina famolavolana indostrialy tsy miankina izay afaka mampiasa fitaovana sy teknika isan-karazany mba hamoronana fitaovana tetezana ho an'ny fanandramana prototype sy fanombanana mialoha ny famokarana. Izahay dia manolotra ampahany vita amin'ny tsindrona amin'ny fandaharam-potoananao hanohanana ny fitilianao manontolo, ary hanampy amin'ny famahana ny olana mety hitranga amin'ny famokarana tanteraka.
Ao amin'ny CreateProto, manampahaizana manokana amin'ny bobongolo haingana izahay, na amin'ny aliminioma na amin'ny vy na amin'ny famolavolana plastika ambany. Miaraka amin'ny traikefa ara-teknika amin'ny famolavolana tsindrona, fitaovana haingana, machining CNC, fanodinana EDM, ary famaranana manokana, ataonay antoka fa mifanena sy mihoatra ny zavatra antenainao indrindra ireo faritra novolavolaina.
Ny famokarana prototypes miorina an-jatony ka hatramin'ny arivo dia mety ho dingana iray tena ilaina alohan'ny hifindrana amin'ny famokarana betsaka. Ny mpanamory fiaramanidina dia mihazakazaka mamolaka tsindrona dia afaka mampifanaraka ny elanelana misy eo amin'ny prototype sy ny famokarana, mamita haingana kokoa ny fanandramana miasa sy endrika endrika anao, mamela anao hampiseho ny mpanjifa sy ny mpivarotra mety ho vokatra vita farany, ary avelao ny olana rehetra ho hita sy ahitsy. alohan'izy ireo nafindra tamin'ny famokarana.
Ny fampitaovana haingana amin'ny tetezana dia matetika no lafo kokoa noho ny lasitra famokarana noho ny fananganana haingana sy ny fotoana fohy kokoa noho izany, noho izany mampihena ny lasitra sy ny vidin'ny famokarana amin'ny ankapobeny.
Ny fizotran'ny orinasa sy ny ekipa efa za-draharaha mifantoka amin'ny tetikasanao dia ahafahanay manery ny indostria hitarika fotoana amin'ny famolavolana sy famolavolana. Tsy ilaina ny mampandefitra ary mametra ny volavolanao amin'ny zotranay, satria manana ny fitaovana, ny fahafaha-manao ary ny fahalalana izahay hanaterana ireo faritra novolavolaina ao anatin'ny 2-5 herinandro, na inona na inona indostria misy anao. Mampiroborobo ny fizotran'ny tsindrona tsindrona anao ny fampandrosoana ny vokatra.
Fametahana tsindrona haingana | Famokarana volavola ambany ho vahaolana mahomby
Ny famolahana tsindrona haingana dia iray amin'ny famolavolana plastika, izay tsy vitan'ny fanamboarana mpanamory fiaramanidina an-jatony maro ho an'ny prototypes fitsapana akaiky ny vokatra farany, fa manome ihany koa ny famokarana ampiasain'ny faritra farany ampiasaina amin'ny famokarana ambany. Ny fahafantarana ny isan'ny amponga namboarina mety ilainao dia manome soso-kevitra tsara kokoa amin'ny fampiasam-bolan'ny namanao amin'ny fiainana teknolojia sy ny teknolojia fanodinana.
Ao amin'ny CreateProto, mifangaro fomba fanaovan-tsolika fanaovan-tsindrona nentim-paharazana izahay miaraka amin'ny fitaovana bobongolo haingana hamokarana faritra vita amin'ny plastika haingana sy vidiny mahomby amin'ny kalitaon'ny famokarana fa tsy prototypes miorina mbola eo am-pamolavolana sy fizahan-toetra. Createproto dia mandray fomba mavitrika amin'ny tetikasa plastika, manome torohevitra mahomby sy voavolavola avy amina endrika, fitaovana, fizotran'ny famokarana, famokarana, sns. Izahay dia mamaritra ny làlana tsara indrindra mankany amin'ny tsena mifototra amin'ny tanjon'ny tetik'asa sy ny zavatra andrasana. Ireo injenierantsika sy mpamolavola tompona antsika dia afaka manao an'ity dingana ity tsy dia maharary sy mandany fotoana mba hahazoana antoka fa azo asiana endrika tahaka ny kasaina ny anjaranao, hatramin'ny voalohany. Raha te hanana lasitra fanindronana haingana ianao dia azonao atao ny mampakatra rakitra CAD maimaim-poana any.
Drafitra havaozina ho an'ny famokarana (DFM)
Ny famolavolana ny fahaiza-mamokatra (DFM) dia mandrakotra ny lafiny rehetra amin'ny fizotry ny famolahana tsindrona manomboka amin'ny famolavolana ampahany, ny famolavolana fitaovana ho an'ny bobongolo, ary ny fifantenana ireo fitaovana hatramin'ny fikirakirana.
Miaraka amin'ny traikefa azo tsapain-tanana mandritra ny 20 taona amin'ny fanaovana lasitra nentim-paharazana sy ny fitaovana haingana, ny injenieranay dia hiara-hametraka fitanisana an-tserasera sy famakafakana momba ny famokarana, ary afaka hanao famerenana famolavolana hanoroana ny haitao tsara indrindra ho anao. Anisan'izany ny karazana vavahady sy ny toerana misy azy, ny tsipika fizarana, ny volavola, ny rafitra mpihazakazaka, ny slide ary ampidiro, ny famafana, ny refy mandanjalanja, ny fandeferana ary ny famaranana eny ambonin'ny tany, ny raharaha rehetra rehefa tonga ny fotoana famokarana.
Tsy mila miandry ny famokarana mba hampiharihary ny olana amin'ny famolavolana, satria amin'ny alàlan'ny famolavolana optimised ho an'ny famokarana, ny injenieranay dia hiantoka ny faritra azonao ampitaina sy hamolavola mba hamaritana araka izay azo atao.
Safidio ny fitaovana mety amin'ny fitaovana mould
Ao amin'ny CreateProto, ny teknolojianay dia manome ny fahafaha-manao lasitra feno sy fanohanana eo noho eo ny fanovana fitaovana. Manomboka amin'ny famolavolana prototype ka hatramin'ny famokarana fitaovam-pamokarana dia afaka manamboatra fitaovana mandrafitra tsindrona avy amin'ny steels aluminium 7075, P20 ary NAK80 vy vy vy vy mafy isika.
Ny fitaovana mety amin'ny bobongolo fitaovana amin'ny tetikasanao dia manandanja amin'ny fanapahan-kevitrao amin'ny famokarana. Raha ny mahazatra dia tafiditra ao anatin'izany ny fiheverana toy ny fampiasana namboarina, ny takian'ny volavola ary ny fampiasam-bola antenaina, ary koa ny fahasarotan'ny endrika, ny firafitry ny bobongolo, sns. Tsy azonao antoka hoe iza amin'ireo no hofidina? Hanampy anao izahay handanjalanja ny tsirairay amin'ireo tombony ireo hahitanao ny vahaolana tsara indrindra ilain'ny vokatrao.
Ho fanampin'izany, manolotra famaranana SPI mahazatra izahay, firafitra EDM ary karazan-dahatsoratra voasokitra ao anatin'izany ny andiany Mold-Tech® MT ary andiany VDI® 3400. Misy kojakoja isan-karazany azo alaina ao amin'ny famolavolana ny vokatrao.
Drafitra famokarana bobongolo tena mahomby
Ny famolavolana injeniera mijery mialoha dia manohana ny fizotry ny famokarana lasitra mahomby. CreateProto dia manomboka ny fizotran'ny famerenana endrika miaraka aminao sy ireo injenieran'ny endrika. Mino izahay fa ny vahaolana tsara dia midika hoe fifanakalozana feno mandritra izany fotoana izany ahazoanao antoka fa afaka mahazo safidy safidy ianao.
Mba hanomezana fahafaham-po tanteraka ny filan'ny famokarana haingana sy ny fihenan'ny vidiny, dia mazàna izahay mampiasa ny rafitra Master Unit Die (MUD) hanova haingana ireo fotaka bobongolo izay voaporofo fa mahavonjy fotoana fampitaovana sy mampihena ny vidiny. Mbola zava-dehibe kokoa aza, ny fanovana injeniera dia tsy misy afa-tsy ny fampidirana bobongolo MUD, fa tsy ny lasitra bobongolo mahazatra. Azonao atao koa ny manangona ampahany mitovy amin'izany amin'ny zavatra fantatra ho toy ny fitaovan'ny fianakaviana hahazoana tahiry bebe kokoa. Ankoatr'izay, ny fampidirana manual na semi-automatique dia matetika ampiasaina amin'ny fitaovana bobongolo haingana.
Fitaovana aliminioma haingana | Vidiny ambany sy fohy kokoa
CreateProto dia efa niaina taona maro tamin'ny famoronana fitaovana aluminium haingana. Matetika, ny bobongolo vita amin'ny aliminioma vita amin'ny AL7075 (izay alim-piaramanidina avo lenta) dia matanjaka sy mateza toy ny fitaovana P20 nentim-paharazana. Koa satria mavesatra kokoa ny lanjan'ny aliminioma ary azo ampiasaina tsara ny milina, dia mampihena ny vidiny ny fanamboarana aliminioma hanohitra bobongolo mifanohitra amin'ny vy mafy satria azo ampiasaina amin'ny 15% -30% haingana kokoa sy voadinika 3-10 haingana kokoa. Noho ny anton-javatra isan-karazany manomboka amin'ny vidiny, ny fotoana itarihana, ny volabe sns, maro ireo orinasan-tsindrona fanindronana no manomboka manome lanja bebe kokoa ny bobongolo sy ny fitaovana fampidirana aluminium.
Manana famolavolana ampahany sarotra, miaraka amin'ny fandeferana tery, ary ny famaranana sy ny firakofana isan-karazany? Aza manahy. Ny fizotry ny fitaovana aliminioma antsika dia afaka mandray an'io ary tsy hangataka aminao izahay hanova zavatra, ary hamela anao hahatratra ny tsena haingana indrindra miaraka amin'ny sandany kely indrindra.
Fiovan'ny famokarana haingana sy ny vidin'ny fitaovana ambany
Miaraka amin'ny famolavolana sy ny famolavolana lasitra nohamafisina, ny lasitra aliminioma antsika dia nihoatra lavitra ny androm-piainany namboarina. Ny andrasana mandritra ny androm-piainan'ny vokatra 100,000 dia azo tanterahina amin'ny lavaka aluminium.
Ny aliminioma dia azo ampiasaina hanamboarana bobongolo MUD, izay midika ho vidin'ny fitaovana ambany kokoa ary fanovana famokarana haingana kokoa, ary hanolorana ny fomba fiasa mahavariana ho an'ny fandaharam-potoana ara-potoana.
Ny fahombiazan'ny milina haingana amin'ny aliminioma dia ahafahantsika milina mivantana ny bobongolo, ohatra, ny taolan-tehezana, taratra, sisiny maranitra sns. Mampihena ny fotoana hanaovana fitsaboana EDM sy Wire EDM.
Aluminium dia mpitondra hafanana mahery vaika. Ny fampangatsiahana haingana dia mazàna midika fihenan'ny vanim-potoana sy ny faritra haingana kokoa, ary mamela antsika hikirakira tsy misy milina fantsona mangatsiaka.
Ny fitaovana aliminioma dia mora kokoa amin'ny milina noho ny fitaovana vy. Noho izany ny fanovana famolavolana iterative na famoronana fanovana dia mavesatra kokoa ary tsy dia misy fiatraikany amin'ny vidiny.
Entana tanana: fomba tsotra amin'ny faritra plastika sarotra
Ny fitaovana aliminioma haingana sy ny bobongolo amin'ny famokarana dia samy hafa amin'ny fomba famoronana geometry sarotra ao anaty lasitra, toy ny undercuts sy ny kofehy, sns. Matetika, ny bobongolo vita amin'ny aliminioma dia mampiasa enta-mavesatra entina hamoronana ireo endri-javatra ireo fa tsy ny fampiakarana mandeha na solo-tsary mahazatra an'ireo lasitra vy famokarana .
Ny enta-mavesatry ny tanana dia singa masinina izay ampidirina amin'ny tanana ejector amin'ny bobongolo alohan'ny tifitra tsirairay. Vantany vao vita ny fitifirana, dia mamoaka ny ampahany plastika vita amin'ny volon-tànana ny tanana-mamoaka. Ny mpandraharaha iray dia manala ireo enta-mavesatra avy amin'ny ampahany ary mamerina azy ireo amin'ny lasitra ho an'ny fitifirana manaraka.
Ny enta-mavesatra ao anatin'ireny toe-javatra ireny dia manolotra vahaolana tsotra amin'ny fanamby sarotra amin'ny famolavolana, izay mety ho fomba fanao tsara indrindra hamokarana ampahany plastika saro-pantarina sy hazakazaka ambany noho ny vidiny ambany sy ny fotoana fohy kokoa.
Famolavolana tsindrona plastika | fomba fiasa famokarana tena izy
Fomba fanolorana tsindrona plastika
Raha vantany vao vonona ny fitaovana famolavolana plastika, dia misy ireto dingana manaraka ireto:
Atsofohy ny resina amam-bika amin'ny endrika pellet manta, araraoty ny akora ary ampidirina ao anaty hopper.
Afangaroy sy afanaina ny pellet mandra-pitrandrahana azy tanteraka ary mamorona resin-dronono.
Atsofohy ao anaty lavaka famolavolana mihidy amin'ny alàlan'ny visy miverina ao anaty barika ao amin'ilay masinina.
Ampamiraho ny lasitra hanamafisana ny ampahany ao anatiny.
Sokafy ny bobongolo ary alao amin'ny ejector ny ampahany. Avy eo manomboka ny tsingerina vaovao.
Ny fisafidianana mpiara-miasa amin'ny tsindrona tsindrona za-draharaha dia manakiana
Ny famolavolana thermoplastic injection dia dingana mahazatra. Ny fahalalana, ny fahaizana ary ny fahaizana bebe kokoa no ilaina, ary koa ny fitaovana sy fitaovana mety. Betsaka ny singa manan-danja izay mila arahi-maso amin'ny fotoana tena izy, ao anatin'izany ny mari-pana, ny tsindry, ny tahan'ny fikorianan'ny fitaovana, ny hery fametahana, ny fotoana sy ny tahan'ny fihenam-bidy, ny tahan'ny hamandoana ary ny fotoana famenoana, ary koa ny fampifangaroana ireo toetra mampiavaka ireo singa miovaova amin'ny famolavolana. . Manomboka amin'ny ampahany voalohany amin'ny fitaovana hatramin'ny famokarana vokatra dia misy rojom-pahalalana tafiditra ao amin'ny famolavolana sy ny fanamboarana, ary ity fizotrany ity dia fahataperan'ireo traikefa an-taonany maro ataon'ireo injeniera sy machinista efa zatra sy mahay.
CreateProto dia mpamokatra volavola ambany, afaka manome volavolan-tsasatra mandritra ny androm-piainana - manomboka amin'ny 100 ka hatramin'ny 100000 mahery miaraka amin'ny famolavolana tsindrona plastika. Isaky ny mampiditra fahaizana manokana tsy manam-paharoa izahay amin'ny famoahana kalitao sy famerimberenana amin'ny lafiny rehetra. Createproto dia mpamokatra ampahany plastika maimaim-poana izay afaka manao ny zava-drehetra ao ambanin'ny tafo iray, ao anatin'izany ny famolavolana sy ny fananganana fitaovana, ny fanafoanana ny fitaovana, ny fisafidianana fitaovana ary ny fizotran'ny famolavolana tsindrona. Midika inona izany ho an'ny mpanjifa? Midika izany fa tantanina mora ny orinasanao ary tsy handany fotoana na vola hiatrehana dingana tsy mahomby ianao. Miaraka amin'izany, ny Createproto dia miasa toy ny tsipika fivoriambe mandeha ho azy.
Rehefa milamina ny endrika na mitombo ny habetsany, hanampy amin'ny famindrana amin'ny famokarana bobongolo mahazatra ny CreateProto. Amin'ny maha mpiara-miasa amin'ny famolavolana tsindrona efa za-draharaha anay, dia ataontsika tsotsotra ny fanodinana bobongolo amin'ny safidy mahomby marobe mifanaraka amin'ny filanao. Ny vahaolana samihafa ho an'ny plastika manokana dia miasa miaraka amin'ny loharano tokana ho an'ny zava-drehetra manomboka amin'ny famokarana ka hatramin'ny fandefasana.
Prototyping haingana sy famokarana, Prototyping haingana, Cnc Prototyping haingana, Cnc Prototyping, Serivisy fanaovana pirinty 3d sy Prototyping haingana, Prototyping haingana,